Iindaba -Ncedisa amaqabane ekuphuhliseni iimarike
NgoFebruwari 26,2018, usekela-Mongameli u-Lihong Chen utyelele amaqabane e-Bromic Group.Efforts kufuneka yenziwe ukwanelisa iimfuno zamaqabane, ukunceda iqabane ukuba liphuhlise imveliso. Imveliso ephambili ibandakanya: Ikota yokuTshintsha kweValve yokuNikezela; IiValve zokuNikezela ngeeNdawo ezininzi;F1960&F1807 iintsika neZilinganisi ; Ibhola yebrassivelufa, njl. NjengeDepho yasekhaya, iApollo, Watts, tec Abathengi bethu banelisekile ziimveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo.
Sigxininisa kumgaqo wethu wokudibanisa "uMthengi kuqala, uMgangatho osekwe" kwaye uya kuqhubeka nokuseka ukusebenzisana ngokunyanisekileyo kweshishini kunye nomthengi ngamnye.
Ngoku uluntu lixesha lokuqhuma kolwazi, amashishini kwiimveliso akanakuthintelwa ukuba ahlangane nabantu abakhuphisana nabo, ukhuphiswano lwamashishini, kwamanye amashishini, kuyinto elungileyo. Ngenxa yokhuphiswano, amashishini aphucule umgangatho weemveliso kwaye aphucula umgangatho wenkonzo, kwaye abathengi bafumane ukusetyenziswa okungcono okanye okungakumbi kunye neenkonzo ngemali encinci….
Intengiso "yisefu". Ngelixa eli shishini liphuhlayo kwaye liqhubela phambili, imakethi ikwaphumelela ukhuphiswano kolu shishino. I-China iye yaba sisityalo esivelisa umhlaba, kwaye ikwalilizwe elikhulu kwimveliso yempompo kunye nevalve. Kwinkulungwane entsha, impompo yase China kunye nomzi mveliso wevalve wenze inkqubela phambili ngokukhawuleza, kodwa ikwajongana nokhuphiswano olukhulu kunye nemiceli mngeni enzima.
Kuphela yimpompo kunye neshishini levalve elinokuqonda ngokufanelekileyo nangokucacileyo imeko yangoku yeshishini, zihlala ziphucula iimveliso zazo, zomeleza imvakalelo yoxinzelelo, zomeleza inkcubeko yeshishini kunye nomxholo wenkonzo yentengiso….
Ngokukhuthazwa kunye nenkxaso yomgaqo-nkqubo wesizwe, iShanghai, iFujian kunye neZhejiang benza iinzame ezinkulu zokukhuthaza ukuguqulwa kunye nokuphuculwa kwempompo kunye nomzi mveliso wokuvelisa ivelufa, kubandakanya amanye amashishini aphantsi korhulumente, amashishini angaphandle kunye namashishini adibeneyo.
Ithemba lotyalo-mali kushishino lwevalufa lwase China lubanzi kakhulu. Ikamva lempompo kunye nomzi mveliso wevalufa licacile. Ukusuka kumava edlulileyo, isiphelo esiphantsi seshishini le-valve lase China siphumelele ngokusisiseko. Amashishini asekhaya kumbindi nakwindawo ezinamanqanaba aphezulu ngokuthe chu athatha indawo yokungenisa elizweni kunye neenzuzo zokuthelekisa indleko, ijelo kunye nenkonzo, kwaye kulindeleke ukuba ajoyine imakethi yamanye amazwe ukuze ikhuphisane kwintengiso yamanye amazwe.